WFP oo soo saaray war ay ka naxeen Qaxootiga Soomaalida Kenya | Kobciye24.com
Barnaamijka Cunadda Aduunka ee QM ayaa isniintii ku dhawaaqay in la dhimi doono Qoontada Rashinka ee la siiyo Qoxootiga ku jira Xeryaha Kenya oo kor dhaafaya 420,000 Ruux taasi oo ay u sababayeen Miisaaniyadda oo yar.
Warbixin ay soo saartay WFP ayaa lagu sheegay in 30 % Raashin la siiyo Dadka Qoxootiga ah la dhimidoono islamarkaana la dhaqangalinayo Bilowga Bishaan.
Dadka ku Nool Xeryaha Xoqootiga kenay 90% waa Soomaali Xeryahaas u galay si ay u helaan Nolol kawanaagsan tii ay Dalka uga Qaxeen, inta kalena waxa ay ka Yimadeen Wadanka Koofurta Suudaan.
Annalisa Conte oo ah Masuul sare oo ka Tirsan WFP ayaa isagoo ku sugan Magaaladda Nairobi waxaa uu sheegay in ay wajahayaan gaabis ku yimid Miisaaniyadooda taasna ay ku kaliftay in ay yareeyaan Raashin ay siiyaan Dadka ku jira Xeryaha Qoxootiga Kenya.
WFP waxaa ay u baahantahay 28.5 Million oo Dollar si ay Dadka u siiyaan Raashinka ay u baahanyihiin, sida lagu sheegay Warbixinta ay soosaartay Hey’adda QM u qaabilsan Cunadda.
Heey’adaan ayaa sidoo kale waxa ay Deeq-Bixiyeyaasha ka Codsatay in ay kordhiyaan Deeqda lagama maarmaaanka u ah in Dadka Xeryaha Qoxootiga ku jira ay helaan Rashinka ay kamid yihiin Galayda, Bariiska, burka Nafaqaysan iyo Saliidda.
Heey’addu Dhanka kale waxa ay ka Digtay Nafaqa darro laga cabsi qabo in ay soo wajahdo Caruurta ku nool Xeryaha Qoxootiga oo aan heli doonin Raashinkii Nafaqeeysnaa ee ay ubaahnaayeen.